In Badan Ka Barro Raaxaysiga Lamaanaha Iyo Wax Walboo Ku Saabsan Nolosha Qoyska Qalinkii Naciima Af-barwaaqo.. - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
In Badan Ka Barro Raaxaysiga Lamaanaha Iyo Wax Walboo Ku Saabsan Nolosha Qoyska Qalinkii Naciima Af-barwaaqo..
Published: January 8, 2017, 5:31 pm
Waa maxay raaxaysi?
Raaxaysigu waa xidhiidh u dhexeeya lammaaneyaasha dareenka jinsiga wadaaga, ama dhex mara laba qof oo kala jinsi duwan misana is qaba, kuwaasoo baahidooda dareen la xidhiidho wadaagidda falgal isugu jira xoodaamin, istiimis iyo galmo. Balse raaxaysigu intaas kuma koobna, waxuu noqon karaa mid hadal keliyaata ah, sida odhaahyo raxmad iyo soo jiidasho jinsideed leh, ammaanta, maaweelada iwm.
Waxaa kale oo uu noqon karaa mid ku yimaadda jalleecidda dareenka caashaqeed ka muuqdo. Xeerka ugu weyn ee raaxaysigu waa inay jirto iska raalli ahansho labada dhinac ah. Raaxaysiga gogosha ee hammuunta leh waa dawo; waxa uu dawo u yahay daalka, cadhada, culayska maskaxda, welwelka iyo fikirka. Wuxuu nafta daallan hilmaansiiyaa walbahaarka, balse waa in raaxada loola dhaqmaa si mudnaan leh.
Maxaa sababa hammo yarida?
Waxyaabo badan oo welwel iyo walbahaar is biirsaday ah ayaa sabab u noqon kara tabar darrida dhanka wasmada ama hammo yarida. Noocyadaas waxaa ka mid ah:
Cabsi ah in aanad sariirta dusheeda ku qancin karin lammaanahaaga,
Daciifnimo muuqaalka ah, sida miisaanka jidhka iyo dhisnaantiisa,
Culays dhanka xidhiidhka lammaanaha ah,
Ninka oo welwel ka qaba xubintiisa taranka,
Kacsiga oo ka daaha ninka,
Gabadha oo welwel ka qabta in aysan kacsi saxa dareemin amase heer malabsiya gaadhin si ay ugu raaxaysato galmada,
Iyo gabadha oon raaxada noocyadeeda casriga waxba ka aqoonin una baahan tababbar.
Sida la wada fahamsan yahay, qof waliba wuxuu ka fikirayaa heer uu ku gaadhi lahaa heer uu habeenkiiyoo dhan raaxaysi iyo galmo wadi karo; ragga ayaa ugu badan kuwa isku daya inay kor u qaadaan tamartooda dhanka galmada, iyagoo doonaya inay lammaanahooda dhanka galmada ku farax galiyaan. Haddaba, waxaa jira sabab lagu joogtayn karo in aysan hammadaado is dhimin.
Xidhiidhka wadnaha iyo galmada.
Xubinta taranka ninka (Guska) marwalba waxa ay ku shaqaysaa qulqulka dhiigga. Maskaxda ayaa amar siisa xubinta ragga, taasoo keenaysa inuu marinnadaas dhiig ka buuxsamo marka uu jiro dareen kacsi. Wadnaha ayaa ah xubin muhiima oo jidhka gaadhsiiya dhiigga guud ahaan uu ka mid yahay dhiigga xubinta ragga dhaqaajiya. Mar haddii maskaxda welwel ku yimaado iyadoo lagu gudo jiro raaxaysi, waxaa istaagaya amarkii ay siinaysay xubinta ragga ee keenayay in wadnuhu uu dhiig badan ku cadaadiyo xubinta ragga marinnadiisa, waxayna taasi keeni kartaa in kacsigii loo baahnaa aysan samayn amma uu jilco.
Hab ka mid ah hababka ugu wanaagsan eed ku joogtayn karto firfircoonidaada waa in aad samaysaa jimicsi dhanka wareegga dhiigga ah. Orodka ayaa ka mid ah jimicsiyada kordhiya, maadaama galmadu ay u baahan tahay in heerka wadnuhu uu kaco.
Cuntada iyo kacsiga:
Jimicsiga oo keliya maaha waxyaabaha kordhin kara awoodaha ninka ragga ah, balse waxaa jira waxyaabo ka mid ah cuntooyinka la cuno oo kordhiya cadaadiska dhiigga ee guska. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah.
Basasha iyo toonta
Basbaaska iyo filfisha
Maaddada Omega 3
Looska iyo digirta
Haddii aad tahay qof doonaya inuu hagaajiyo tabartiisa raaxeed iyo wasmeed, waa inaad joojisaa balwad haddii aad leedahay. Balwadu waxay noqon kartaa wax kastoo qof caado u leeyahay, laakiin taynu ka hadlaynaa waxa weeyaan tan maandooriyaha ah. Isticmaalka balwaduhu waa caado aad u xun oo qofka u geysanaya dhibaatooyin maskaxeed iyo jidheed.
Dareenkaaga sii xaaskaaga:
Raaxadu maaha wax hal jiho uun loo sameeyo mana aha jid hal dhinac u socda; waa badweyn waana beer weyn oo hadba dhinacii aad ka soo gasho aad midho ka guran karto, haddii aad garanayso sida midhahaas u goosanayso. Si aad u samayso raaxo habboon oo aad ku wada faraxsan tihiin, waa inaad xaaskaaga la socotaa dareenkeeda, korkeedana akhrisataa. In aad la socoto baahida jinsiyadeed ee afadaada waxay raaxada gogosha kaga dhigaysaa mid farxad iyo dhadhansi macaan leh.
Sida loo kordhiyo hammada:
Hammadu waa matoorka wada dareenka raaxaysiga ee qofka, nin ama naag kuu doono ha noqdee. Jinsi walba lab iyo dheddig waa u dan inuu barto sida muddo gaaban ama mid dheerba lagu kordhin karo laguna tabarayn karo hammada iyo la qaybsiga raaxada hammuunta leh ee lammaanaha. Waxa kale oo dhici kara inaad talo u baahato haddii uu kaa lumo rabitaanka raaxada gogosha, ama ay ku soo wajahdo awood yari dhanka galmada ah, ama u diyaarsanaanta raaxaysiga.
Tallaabada 1aad: Ku dedaal in maskaxaadu ay deganaato mar walba, si wanaagsanna aad u fikirto, taasi waxay ku siinaysaa qanacsanaan iyo isku kalsoonaan, marwalba oy korodho isku kalsoonidaada waxaa kordhaysa tabartaada dhanka raaxada gogosha.
Tallaabada 2aad: Isku day in aad tixgeliso muuqaallada maskax ahaan qofka siin kara fursad uu kaga bixi karo ka dibna kor u qaadi kara dareenka jinsiyadeed. Baahida galmada waala samayn karaa haddii la abuuro jawi qofka maskaxdiisa ka soo saari kara waxa culayska ku ah, isla markaasna waala keeni karaa meel degan oo baahi jinsiyadeed ku abuuranto.
Si aad u abuurto jawi degan oo lammaanaha ku dhiiri gelinaya in ay korodho baahida galmada, waa inaad shay-yadan ka fogaysaa qolka jiifka ee aad ku raaxaysanaysaan. Ha sudhan sawir waalidkaaga ama qof aad xushmaynayso oo markay ishaadu qabato kuula muuqanaaya inuu ku soo eegaayo; waayo waxa laga yaabaa inuu sawirkaasi kugu abuuro jawi xishood. Carruurta xataa kuwa aadka u yar gee meel haboon oo aadan ka qajilayn amaba u qaadanayn inay ku soo eegayaan.
Tallaabada 3aad: Isku diyaari raaxada, haddii aad qorshaynayso inaad wakhti xoodaamo wanaagsan leh la qaadato lammaanahaaga abuur xaaladaas, si aad lammanaaga u dareen siiso. Ugu horrayn cab cabbitaan caajiska iyo hurdada kaa qaada sida shaah rinji ah ama qaxwo inta aadan isku diyaarin wakhtiga xoodaamiska—shaaha iyo qaxwaha waxay kaa qaadayaan caajiska waxaadna gelaysaa jawi nashaad iyo furfurnaan leh. Dib u milicso haddii ay jiraan wakhti xasuus iyo yaab idiin lahaa, ka dib ku indho sarcaadi lammaanahaaga xasuusta wakhtigaas oo ficil ah. Rabitaanka raaxada qofba si ayaa lagaga keensadaa. Laciyaar oo jil xasuus hore, si layaab leh usoo jiido dareenka lammaanahaaga ,hilitaankaaguna ha noqdo mid farriin shahwadeed gudbinaaya.
Tabar darrida Galmada:
Diyaarsanaanta raaxada gogosha waxa ay noqonaysaa mid muhiim u ah nimanka maadaama ay tahay arrin xidhiidh la leh ragannimadooda. Welwelka ugu badan ee ninka ragga ah ku dhaca ayaa ah awooddiisa uu gogosha ku qancin karo xaaskiisa, tabartiisa uu naag ku uurayn karo iyo dhumucda xubintiisa taranka oo inta badan ragga ay dareemaan inay ku yar tahay, balse yaraan iyo weynaan midna saamayn gooni ah kuma laha raaxada iyo hammuunta. Arrintaasi waa kuwa ugu badan ee ninka ragga mashquuliya markay timaaddo xagga ragannimadiisa.
Maxay tahay tabar darrida galmadu?
Inta badan ragga ayaa lagu eedeeyaa inay yihiin kuwa ay tabar darridu soo wajahdo oo aan si habboon u qaban karin hawshaa wasmada, taasoo lagu fasiro tabar darro. Waxyaalaha sababa arrintaas waxaa ka mid ah:
Inuu awoodi waayo inuu hammuun gooyo gabadha,
Inuu awoodi waayo inuu kacsado amaba muddo ku filan ceshan karin kacsigiisa,
Inuu degdeg u biyo baxo,
Inuusan marna xasuusan raaxada xaaska ee uu keligii raaxaysto,
Inuusan aqoon ama tix gelin xoodaamiska iyo istiinka, balse horay ka sameeyo galmo,
Inuu ku guul darraysto suugaanta iyo xawaashaynta raaxada, iyo
Inuu kari waayo inuu xaaska ka keensado hammuun iyo xaax.
Marka laga eego dhanka dumarka iyaguna waxa ay dareemaan dhibaato tan ragga la mid ah marka ay timaaddo kartida dhanka gogosha. Raaxada gabdhaha waxay maraysaa saddex heer oo kala ah: xoodaamis, istiimin iyo wasmo, halka ragga qaar ay ka bilaabaan galmada! Sidaas darteed ayaa tabar darrida raaxada loogu fasiraa qodobbadan soo socda.
Gabadha hammadeeda oo hoosaysa,
Hammuun la’aan ku dhacda,
Xubinteeda taranka (siilka) oo qalayl noqota mma aan soo dayn dheecammada galmada ku lari lahaa dhadhansi iyo malabsi,
Galmada oo ay xanuun ka qaaddo,
In ay biyo baxdo wakhtigeedii oon la gaarin.
Maxaa sababa raaxo xumida?
Arrinta raaxo xumida waxaa loo sababeeyaa in ay keenaan dhawr arrimood oo la xiriira jidhka iyo maskaxda qofka; arrimahaasina waxa ka mid ah:
Hoormoono aan dheellitirnayn,
Isticmaalka tubaakada ama nuugista sigaarka,
Adeegsiga khamrada ama cabbitaannada lagu saqraamo,
karkabo (Deadajin) joogto ah,
Welwel dhanka diyaarsanaanta ah,
Dhibaato hore oo dhanka galmada ah oo qofka soo gaartay,
Dhibaato dhanka seedaha murqaha ah,
Cawaaqib xumo ka dhalatay isticmaal xagga daawooyinka ah,
Caafimaad darro qofka soo wajahda,
Muuqaalka jidhka oo aan wanaagsanayn,
Da’da oo korodha.
Maxaa xal u ah daciifnimada galmada?
Haddii dedaal iyo ka go’naan lala yimaado qofku wuu ka shaqayn karaa kordhinta awooddiisa gogosha iyo raaxaysiga, Tani waa aad samayn kartaa haddii aad lammaane leedahay iyo haddii aad keligaa tahayba. Dhibaato waxay ka timaaddaa dumarka oo ragga u muujiya inay raaxaysanayaan xilli aanay waxba dareemayn, halka ninkana laga yaabbo inuu isku qaato inuu qanciyay ooridiisa.
Ragga qaar marka ay dareemaan inay ku guul darraysteen inay xaaska qancin waayaan waa ay furan. Dumarka iyaga oo ka cararaaya furrinka ayaa laga yaabbaa inay jisho inay ninkeeda raaxadiisa ku faraxsan tahay, balse waxaa ka haboonaan lahayd inay ninkeeda u sheegto waxa ay teebayso, isaguna uusan furin ee isku dayo inuu galo sidii uu isaga soo dhisi lahaa dhankaas ay gabadhu daciifnimada ka sheegtay. Labadan hab ee hoose ayaa lagu xallin karaa daciifnimo kasta oo dhanka raaxada gogosha ah.
Is dawayn: Daciifnimada waxaa sabab u noqon kara caafimad darro, taas oo keenta kacsi wareer. Hormoono aan dheellitirnayn iyo neerfayaal hoos u dhacsan ayaa sidoo kale sabab u noqon kara. Haddii ay sababtu taas noqoto waa inuu ninku la tashadaa dhakhtar, isla markaasna degdeg isku daweeyaaa.
Dib u habee naftaada: Jidhku waa habdhis isku xidh-xidhan; sidaasi darteed, awooddaada galmadu waxay ku xidhnaanaysaa caafimaadkaaga guud. Sidaas darteed inaad naftaada dib u habayn ku samayso oo aad wax ka beddasho hab nololeedkaaga waxay qayb weyn ka qaadan kartaa in aad ka guul gaadho dhibaatada daciifnimada raaxada gogosha. Si aad naftaada dib u habayn ugu samayso qaad tallaabooyinkan ama ugu yaraan qaad kuwa kaa quseeya.
Jjooji sigaar cabbista si dhakhso ah,
Jooji cunista qaadka (Jaadka), dhuuqidda shiishadda iyo cunista tubaakada,
Degdeg u bilaw jimicsi iyo jidh-dhis joogtana u wad,
Baro sida loo dhiso awoodda xubnaha taranka,
Jooji cuntooyinka aan caafimaadka u wanaagsanayn, ee aad cunto ,sida kuwa ay ku badan tahay sokorta baruurta ama caddinta, kuwa gasacdeysan ee leh kiimikooyinka, iyo cabbitaannada la cabburiyay ee sokorta badan leh,
Badso cuntooyinka ay ku badan yihiin maaddooyinka tabarta galmada kor u qaada, kuwaas oo ay ka mid yihiin looska, kalluunka, saliidda kaluunka, yaanyada, mooska, afakaadhoda (Avocados), basbaaska filfisha iwm.
Cab ugu yaraan labo litir oo biyo ah maalintii,
Galmada iyo saamaynta qoyska:
Galmada wanagsan ee labada is qabtaayi ku wada farsan yihiin waxaa ay ka qayb qaadataa dhisidda aayatiin wanaagsan iyo joogtaynta farxadda qoyska. Waa waajib in aad ka haqabtirto baaahideeda jinsiyadeed haddii aanad xanuusanayn.
Faa’iidada raaxada gogosha:
Dad badani waxa ay aaminsan yihiin in midhaha ugu weyn ee laga fisho isu galmoodka ay tahay in la helo ubad, balse sida xaqiiqda ah waa ay ka ballaadhan tahay intaas. Raaxaysiga hammunta leh ee gogosha waxa uu sameeyaa gebi ahaanba nolosha qoyska, haddii ay ahaan lahayd farxadda, niyadsamaanta, jacaylka, cafimaadka, xasuusta, dhisidda kalsoonida iyo caadifadda. Raaxada wanaagsan waxaa ay qoyska dhexdiisa ka dhalisaa:
Ajar iyo dambi dhaaf,
W/Q: Naciima Abwaan Qorane “Af-Barwaaqo”
Jilciso Dabiici Ah Oo Tintaada Ka Dhigeyso Mid Dhaldhalaal Iyo Qurux Badan..
Saddax Arimood Oo Aad Kaga Qayb Qqaadan kartid Inad Dhisato Shaqsiyad Wanaagsan.